Sun Shade Factory - China Shade ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ပူဖောင်း PE ရုပ်ရှင်မျက်နှာပြင်နေအရ ...
စိတ်ကြိုက်စတီယာရင်ဘီး C ...
Hard ထိပ်တန်းဖြောင့် -up, ခေါင်မိုးတဲ
Tri-Angle Hard ထိပ်ခေါက် ...
170T / 190T / 210T Polyester ကား Sunshade
170T / 190T / 210T Polyester Car Sunshade သည်ရှေ့မျက်နှာစာပြတင်းပေါက်အတွက်တံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူ SS-D-1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249 ၎င်းထည်သည်ငွေရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူကိုကာကွယ်နိုင်ရန်နေရောင်ခြည်နှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုထိရောက်စွာရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ ကားအတွင်းပိုင်းကိုအိုမင်းခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက်ကားအတွင်းရှိအပူချိန်ကိုလျှော့ချပါ။ လုပ်ဆောင်ချက် - ၁ ။ ၂။ အတွင်းပိုင်းအပူချိန်ကိုလျှော့ချပြီးကားအတွင်းပိုင်းကိုကာကွယ်ပါ။ ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရအရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
Bubble PE ရုပ်ရှင်၏နေရောင်အရိပ်သည်မတူညီသောပုံစံများဖြင့်ဖြစ်သည်
ရှေ့ပြတင်းပေါက်အတွက်ကားနေရောင်ခြည်သုံး / နေရောင်ခြည်သုံးမျက်နှာပြင်မှအရိပ် / bubble ပူဖောင်း Sunshade / PE bubble ပုံနှိပ်ခြင်းကား၏နေရောင်အရိပ်
လေဆာရောင်ခြည်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောစက္ကူပြား + ၁.၅ မီလီမီတာ EPE မြှုပ်ထားသည့်နေရောင်အရိပ်ရှေ့မျက်နှာပြင် / လေဆာမျက်နှာချင်းဆိုင်အရိပ် / လေဆာရောင်ခြည်သုံးနေရောင်ခြည်သုံးပစ္စည်းများလေဆာရောင်ခြည်သုံးကားရှေ့ကားရှေ့မျက်နှာပြင်အရိပ်အမှတ်တံဆိပ်: OEM မော်ဒယ်နံပါတ်: SS-61520/24 Materjali လေဆာရုပ်ရှင်ကတ်ထူပြားကို EPE ပါသော အမြှုပ်အရွယ် ၁၃၀ * ၆၀ စင်တီမီတာ / ၁၄၀ * ၇၀ စင်တီမီတာ (သို့) စိတ်ကြိုက်အရောင် Sliver ကားနေရောင်အရိပ်အနေဖြင့်ကား၏နေရောင်အရိပ်နှင့်အတူစိတ်ကြိုက် MOQ 1000pcs ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် - ၁။ ခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှုနှင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအပူချိန်အတွင်းပိုင်းအောက်သို့ကျဆင်းစေရန် ...
ဘေးထွက်နှင့်နောက်ဘက်ပြတင်းပေါက် SS-M-61501/2/3 အတွက်ကား Sun Shade
စိတ်ကြိုက်နှင့်ဘေးထွက်နှင့်နောက်ဘက် Window အတွက် OEM / ODM Car Sun Shade
EPE ရေမြှုပ်နေရောင်အရိပ် SS-61501/2/3/4/27
2mm Silver EPE အမြှုပ်ရှေ့ပြတင်းပေါက်ခေါက်နိုင်သောအရောင်ရှိသောအလူမီနီယံရုပ်ရှင်နှင့်အနက်ရောင် PU သားရေ၊ Matt အပြာရောင်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူ Sunshade
ဝါသနာအိုးပုံသဏ္Retrာန်ပြန်လည်လှည့်နိုင်သောလှိမ့်နေရောင်အရိပ် Car Sunshade / Fan-forma / Rolling Sunshade / Retractable / Cuttable လူမီနီယံရုပ်ရှင်နှင့်ပန်ကာပုံစံခေါက်ထားခြင်းသည်နေရောင်ခြည်ကိုထိရောက်စွာရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုနေစဉ်၎င်းကိုခွဲထုတ်ပါ၊ အသုံးမပြုလျှင်၎င်းကိုပြန်လည်ထုတ်ယူပါ။ ၁ စက္ကန့်သာကြာသည်။ ၎င်းကိုထပ်ခါတလဲလဲဖြုတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင့်ကား၏ရှေ့မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္accordingာန်အရလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြတ်နိုင်သည်။
ထီး sunshade ပစ္စည်း: တိုက်တေနီယမ်ငွေတိပ် + သံမဏိထီးအရိုး + PVC အတုသားရေကား Sunshade / ပန်ကာ - ပုံစံ / တယ်လီစကုပ်ထီးကားနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးတာယာ / ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သော / ခုတ်နိုင်သော ၁။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပူကာကွယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှု; 2. ထီးကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာ, နေကာကွယ်မှုအလွှာ, တပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်; 3. ပြောင်းပြန်ခွက်နံရိုး, အဆင်ပြေသိုလှောင်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံ။
Car Wine Cooler, လူကြိုက်များသောကားခေါင်မိုးတဲ, 12v Car ရေခဲသေတ္တာ Cooler, Mako ကားအအေး, ခရီးဆောင်ကားအအေး 12v, ကားအောက်မှာဖုံးပါ,